Ubumfihlo - Kerry Blue Terrier Foundation
Agasti 5, i-2019: Inqubomgomo Yobumfihlo Ithunyelwe.
Singobani Futhi Le Nqubomgomo Ihlanganisani
Ulwazi Osinikeza Kithi
Imininingwane Esiyiqoqa Ngokuzenzakalelayo
Imininingwane esiyitholayo kusuka eminye imithombo
Kanjani Futhi Kungani Sisebenzisa Ulwazi
Izinhloso Zokusebenzisa Ulwazi
Amabheji Wezomthetho Zokuqoqa Nokusebenzisa Ulwazi
Sihlanganyela Kanjani Imininingwane
Imininingwane Yabiwe Esidlangalaleni
Sigcina Isikhathi Eside Kangakanani
Izilawuli Nezinkampani Eziphendulayo
Indlela Yokufinyelela Kithi
Ezinye Izinto Okufanele Uzazi (Qhubeka Ufunde!)
Izikhangiso Nezinsizakalo Zokuhlaziywa Ezinikezwe Abanye
Isoftware Yesithathu Nezinkonzo
Izivakashi Kumawebhusayithi Abasebenzisi Bethu
Ubumfihlo bakho bubalulekile kakhulu kithi. E-The Kerry Blue Terrier Foundation, sinezimiso ezimbalwa eziyisisekelo:
Sicabanga ngemininingwane yomuntu siqu esikucela ukuthi unikeze kanye nolwazi lomuntu siqu esiluqoqa ngawe ngokusebenza kwezinsizakalo zethu.
Sigcina imininingwane yomuntu siqu uma nje sinesizathu sokukugcina.
Sihlose ukukwenza kube lula ngangokunokwenzeka ngawe ukuthi ulawule ukuthi yiluphi ulwazi kuwebhusayithi yakho olwabiwe esidlangalaleni (noma lugcinwe luyimfihlo), olukhonjiswa izinjini zokucinga, futhi lususwe unomphela.
Sisiza ukukuvikela ekuvikeleni okufunwa nguhulumeni kwemininingwane yakho.
Sihlose ukucaca okugcwele ekutheni siqoqa, sisebenzisa futhi sabelane kanjani ngemininingwane yakho.
Ngezansi kunenqubomgomo yethu Yobumfihlo, efaka futhi icacisa lezi zimiso.
Howdy! Singabantu Kerry Blue Terrier Foundation futhi ziqondiswe e-US, futhi ziphethwe e-US naseCanada. Le Nqubomgomo Yobumfihlo isebenza kulwazi esiluqoqa ngawe uma usebenzisa:
Amawebhusayithi ethu (kufaka phakathi i-kerryblues.info, i-forum.kerryblues.info kanye nengxoxo.kerryblues.info, nama-subdirectories)
Amaphrofayli ethu emidiya yokuxhumana nabantu, (kufaka phakathi amapulatifomu wokuhlaziya weGoogle, kanye namapulatifomu edatha ye-Yelp Instagram Facebook kanye ne-Pinterest)
Eminye imikhiqizo nezinsizakalo zethu ezisebenzayo, ngenkathi ungene ku-akhawunti yakho nathi futhi usebenzisa ukuxhumana nenkampani yethu.
Kuyo yonke le nqubomgomo yobumfihlo sizobhekisa kumawebhusayithi ethu, ezinye izinhlelo zokusebenza zokuhlaziya, neminye imikhiqizo kanye nezinsizakalo ngokuhlangene ngokuthi "izinsizakalo."
Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi le Nqubomgomo Yobumfihlo ayisebenzi kunoma yimiphi imikhiqizo noma amasevisi wethu anenqubomgomo yobumfihlo ehlukile.
Ngezansi sichaza ukuthi siqoqa, sisebenzisa futhi sabelane kanjani ngolwazi ngawe, kanye nokukhetha onakho mayelana nalolo lwazi.
Siqoqa imininingwane kuphela ngawe uma sinesizathu sokwenza kanjalo-ngokwesibonelo, ukuhlinzeka ngezinsizakalo zethu, ukuxhumana nawe, noma ukwenza nezinsizakalo zethu zibe ngcono.
Siqoqa imininingwane ngezindlela ezintathu: uma futhi usinikeza imininingwane, ngokuzenzakalela ngokusebenzisa izinhlelo zethu, kanye nemithombo engaphandle. Ake sisebenzise imininingwane esiyiqoqayo.
Akumangazi ukuthi siqoqa imininingwane osinikeza yona. Inani nohlobo lolwazi kuncike kumongo nokuthi silusebenzisa kanjani ulwazi. Nazi ezinye izibonelo:
Imininingwane Eyisisekelo Ye-Akhawunti: Sicela imininingwane eyisisekelo kusuka kuwe ukuze usethe i-akhawunti yakho. Isibonelo, sidinga abantu ababhalisela i-kerryblues.info, i-forum.kerryblues.info kanye ne-chat.kerryblues.info ukunikeza ikheli le-imeyili kanye negama lomsebenzisi noma igama, kuya ngensizakalo - futhi yikho. Ungasinikeza imininingwane eminingi - njengekheli lakho nolunye ulwazi ofuna ukuluhlanganyela - kepha asidingi lolo lwazi ukudala i-akhawunti ye-WordPress.com.
Imininingwane Yephrofayela Yomphakathi: Uma une-akhawunti nathi, siqoqa imininingwane oyinikezela ngephrofayela yakho esesidlangalaleni. Isibonelo, uma une-akhawunti yeWordPress.com, igama lakho lomsebenzisi liyingxenye yale phrofayela esesidlangalaleni, kanye nanoma yiluphi olunye ulwazi olufaka kuphrofayela yakho esesidlangalaleni, njengesithombe noma incazelo ethi "Mayelana Nami". Imininingwane yephrofayela yakho esesidlangalaleni iyilokho - eyomphakathi - ngakho-ke ngicela ugcine lokho engqondweni lapho unquma ukuthi uluphi ulwazi ongathanda ukulufaka.
Okwenziwayo kanye Nolwazi Lokukhokhisa: Uma uthenga okuthile kithi uzonikeza imininingwane eyengeziwe yomuntu neyokukhokha edingekayo ukucubungula okwenziwayo kanye nenkokhelo yakho, njengegama lakho, imininingwane yekhadi lesikweletu, nemininingwane yokuxhumana.
Imininingwane yangasese nolwazi lokuxhumana: Ngokuya ngezinsizakalo ozisebenzisayo, futhi ungasinikeza imininingwane ngawe ngezinye izindlela ezahlukahlukene, sizoba nalolo lwazi.
Lokhu kungahle kube sobala kuwe ... kepha akukhona kubo bonke abantu!
Ukuxhumana Nathi (Sawubona!): Ungasinikeza nemininingwane lapho uphendula ocwaningweni, ukuxhumana nathi, uthumele umbuzo kumapulatifomu akho ezenhlalo noma i-imeyili, noma ubhalisela incwadi yezindaba. Uma ukhulumisana nathi ngefomu, i-imeyili, ucingo, i-kerryblues.info, isithangami.kerryblues.info kanye nengxoxo.kerryblues.info, amapulatifomu wesithathu anjengamapulatifomu ezenhlalo noma ngenye indlela, sigcina ikhophi yokuxhumana kwethu (kufaka noma yiluphi ucingo ukuqoshwa njengoba kuvunyelwe umthetho osebenzayo).
Siqoqa futhi imininingwane ethile ngokuzenzakalelayo ngohlelo lwethu noma ngabathengisi beqembu be-3rd:
Imininingwane yokungena: Njengabahlinzeki bensiza abaningi online, siqoqa imininingwane iziphequluli zewebhu, amadivaysi eselula, kanye namaseva ngokuvamile atholakala, njengohlobo lwesiphequluli, ikheli le-IP, izikhombi zedivaysi eyingqayizivele, ukuthanda ulimi, indawo ekubhekiswa kuyo, usuku nesikhathi sokufinyelela, uhlelo lokusebenza , kanye nemininingwane yenethiwekhi yeselula. Siqoqa imininingwane yelogi uma usebenzisa i-Services yethu-ngokwesibonelo, lapho udala noma wenza izinguquko kuwebhusayithi yakho ku- kerryblues.info, forum.kerryblues.info naku chat.kerryblues.info.
Imininingwane yokusetshenziswa: Siqoqa imininingwane ngokusetshenziswa kwakho Kwezinsizakalo zethu. Isibonelo, siqoqa imininingwane ngezenzo ezenziwa abaphathi besayithi nabasebenzisi kusayithi besebenzisa i- kerryblues.info yethu, forum.kerryblues.info & chat.kerryblues.info noma ezinye izinsizakalo-ngamanye amagama, ngubani owenze, nini futhi yini into esizeni (isb., [kerryblues.info, forum.kerryblues.info & chat.kerryblues.info igama lomsebenzisi] lisusiwe “Kuthengiwe” [ngesikhathi / usuku]. Njengesinye isibonelo, izinhlelo zethu eziyisisekelo zilandelela imininingwane efana nekheli lakho le-imeyili, izilungiselelo zokuthandwa, izilungiselelo zedivayisi, nezinye izici ezihlobene nomsebenzisi wakho, kanye nolwazi mayelana nendawo yakho. Siphinde siqoqe imininingwane yokuthi kwenzekani lapho usebenzisa Izinsiza zethu (isb. Ukubukwa kwamakhasi, usesho ku-kerryblues.info, isithangami.kerryblues.info & chat.kerryblues.info, izici ezinikwe amandla ku-akhawunti yakho, ukuxhumana ne-Admin Bar yethu nezinye izingxenye Wezinsizakalo zethu) kanye nemininingwane ephathelene nedivayisi yakho (isib, usayizi wesibuko, igama lenethiwekhi yamaselula, kanye nomenzi wedivayisi yeselula). Sisebenzisa lolu lwazi, ngokwesibonelo, ukuhlinzeka izinsizakalo zethu kuwe, kanye nokuqonda ukuthi abantu bazisebenzisa kanjani izinsizakalo zethu, ukuze senze nezinsizakalo zethu zibe ngcono.
Imininingwane Yendawo: Singanquma indawo cishe yedivayisi yakho ekhelini lakho le-IP. Siqoqa futhi sisebenzise lolu lwazi, ngokwesibonelo, ukubala ukuthi bangakhi abantu abavakashela izinsiza zethu ezivela ezifundeni ezithile zezwe. Singahle futhi siqoqe imininingwane mayelana nendawo yakho eqondile ngabathengisi beqembu lesithathu kumapulatifomu angaphandle (lapho, ngokwesibonelo, uthumela isithombe esinemininingwane yendawo) uma usivumela ukwenza kanjalo ngemvume yesistimu yokusebenza kwesistimu yakho.
Ukusebenzisana Namanye Amasayithi Abasebenzisi: Siqoqa imininingwane ethile mayelana nokusebenzisana kwakho namasayithi wabanye abasebenzisi ngenkathi ungene ku-akhawunti yakho nathi, njenge- "Likes" sakho neqiniso lokuthi ubeke amazwana kokuthunyelwe okuthile, ukuze, ngokwesibonelo, sincome okuthunyelwe sicabanga ukuthi ungakuthanda. Njengesinye isibonelo, kubasebenzisi be-Intense Debate, siqoqa imininingwane mayelana nokuphawula okwenze ngenkathi ungene ku-akhawunti yakho, futhi sisebenzise lolo lwazi, ngokwesibonelo, ukufaka izibalo mayelana nokuphawula kwakho (zihlole kudeshibhodi yakho!) Futhi sinikeze ulwazi mayelana nokuphawula kwakho kuphrofayela yakho yomphakathi ye-Intense Debate.
Imininingwane evela kumakhukhi nobunye ubuchwepheshe: Ikhukhi umugqa wolwazi olugcinwa yiwebhusayithi ekhompyutheni yezivakashi, nokuthi isiphequluli sesivakashi sihlinzeka iwebhusayithi ngaso sonke isikhathi lapho isivakashi sibuya. Amathegi e-Pixel (abizwa nangokuthi ama-beacons e-web) ayizigaxa ezincane zekhodi ezibekwe kumawebhusayithi nakuma-imeyili. Kerry Blue Terrier Foundation isebenzisa amakhukhi nobunye ubuchwepheshe obunjengamathegi we-pixel ukuze asisize ekuboneni nasekulandeleleni izivakashi, ukusetshenziswa, kanye nezinketho zokufinyelela kuzinsizakalo zethu, futhi ukulandelela nokuqonda ukusebenza komkhankaso we-imeyili nokunikezela izikhangiso eziqondisiwe Ngemininingwane engaphezulu mayelana nokusebenzisa kwethu amakhukhi nobunye ubuchwepheshe bokulandela umkhondo, okubandakanya ukuthi ungalawula kanjani ukusetshenziswa kwamakhukhi, sicela ubheke inqubomgomo yethu yekhukhi.
Futhi singathola imininingwane ngawe kusuka kweminye imithombo. Isibonelo, uma udala noma ungena ku-kerryblues.info yakho, isithangami.kerryblues.info kanye nengxoxo.kerryblues.info ngokusebenzisa enye insizakalo (efana neGoogle) noma uma uxhuma i-akhawunti yakho nensizakalo yezindaba zokuxhumana (njenge-Twitter), thina uzothola imininingwane kuleyo nsizakalo (efana negama lakho lomsebenzisi, imininingwane yephrofayli eyisisekelo, nohlu lwabangani) ngezinqubo zokugunyazwa ezisetshenziswa yileyo nsizakalo. Imininingwane esiyitholayo incike ekutheni iyiphi imisebenzi oyigunyazayo kanye nanoma yiziphi izinketho ezitholakalayo.
Futhi singathola imininingwane, njengekheli le-imeyili, kusuka ezinsizakalweni zomuntu wesithathu mayelana nabantu abangakabi ngabasebenzisi bethu (… kodwa sethemba ukuthi kuzoba njalo!), Esingase sikusebenzise, ​​ngokwesibonelo, ngezinjongo zokumaketha nokukhangisa njengamakhadi eposi kanye abanye abathengisi ngemisebenzi yethu.
Sisebenzisa imininingwane ngawe njengoba kushiwo ngenhla nangezinhloso ezibhalwe ngezansi:
Ukuhlinzeka ngezinsizakalo zethu — ngokwesibonelo, ukusetha nokulondoloza i-akhawunti yakho, ukusingathwa kwewebhusayithi yakho, ukwenza isipele nokuvuselela iwebhusayithi yakho, ukukukhokhisa nganoma iyiphi insizakalo yethu ekhokhelwayo, noma ukuhlinzeka ngamancoko nezindaba zokujabulisa kwakho ukufunda nge-Longreads;
Ukuthuthukisa futhi sithuthukise izinsizakalo zethu, ngokwesibonelo, ngokungeza izici ezintsha esicabanga ukuthi abasebenzisi bethu bazozijabulela noma ezizobasiza ukuthi bakhe futhi baphathe amawebhusayithi abo kahle;
Ukubheka futhi sihlaziye izitayela futhi siqonde kangcono ukuthi abasebenzisi baxhumana kanjani nezinsizakalo zethu, ezisisiza ukuthuthukisa Izinsizakalo zethu futhi zenze kube lula ukuzisebenzisa;
Ukukala, ukulinganisa, nokwenza ngcono ukusebenza kwezikhangiso zethu, nokuqonda kangcono ukugcinwa kwabasebenzisi nokuheha - ngokwesibonelo, singase sihlaziye ukuthi bangaki abantu abathenga uhlelo olukhokhile ngemuva kokuthola umyalezo wokumaketha noma izici ezisetshenziswa yilabo abaqhubeka nokusebenzisa Izinsizakalo ngemuva kobude obuthile besikhathi;
Ukuqapha nokuvikela noma yiziphi izinkinga ngezinsizakalo zethu, ukuvikela ukuphepha Kwezinsizakalo zethu, ukubona nokuvikela ukuthengiselana okukhohlisayo neminye imisebenzi engekho emthethweni, silwe ngogaxekile, futhi sivikele amalungelo nempahla ye-Automattic nabanye, okungenza ukuthi sinqabe ukuthengiselana noma ukusetshenziswa Kwezinsizakalo zethu;
Ukuxhumana nawe, ngokwesibonelo nge-imeyili, mayelana nokunikezwa nokuphromotha okunikezwa yi-Automattic nabanye esicabanga ukuthi bazokuthakazelisa, bacele impendulo yakho, noma bakwenze waziwe ku-Automattic nemikhiqizo yethu (ongayikhipha ohlwini ngasiphi isikhathi); futhi
Ukwenza ngezifiso ulwazi lwakho usebenzisa izinsiza zethu, unikeze izincomo zokuqukethwe, ukhombe imiyalezo yethu yezentengiso emaqenjini wabasebenzisi bethu (ngokwesibonelo, labo abanecebo elithile nathi noma obe ngumsebenzisi wethu ubude besikhathi esithile), futhi banikeze izikhangiso ezifanele .
Inothi lapha lalabo abase-European Union mayelana nezizathu zethu ezingokomthetho zokucubungula imininingwane ngawe ngaphansi kwemithetho yokuvikela idatha ye-EU, okuwukuthi ukusetshenziswa kwethu kwemininingwane yakho kususelwe kulezizathu:
(1) Ukusetshenziswa kuyadingeka ukuze kufezekiswe ukuzibophezela kwethu kuwe ngokuya ngemibandela yokusebenza kwensiza noma ezinye izivumelwano nawe noma kuyadingeka ukuphatha i-akhawunti yakho - ngokwesibonelo, ukuze sikwazi ukufinyelela kuwebhusayithi yethu kudivayisi yakho noma ukukhokhisa wena ngecebo elikhokhelwe; noma
(2) Ukusetshenziswa kuyadingeka ekuthobeleni isibopho esingokomthetho; noma
(3) Ukusetshenziswa kuyadingeka ukuze uvikele izintshisekelo zakho ezibalulekile noma zomunye umuntu; noma
(4) Sinentshisekelo esemthethweni yokusebenzisa imininingwane yakho - ngokwesibonelo, ukuhlinzeka nokuvuselela izinsizakalo zethu; ukwenza ngcono Izinsizakalo zethu ukuze sikwazi ukukunikeza ulwazi olungcono kakhulu lomsebenzisi; ukuvikela Izinsizakalo zethu; ukuxhumana nawe; ukukala, ukulinganisa, kanye nokwenza ngcono ukusebenza kwemikhangiso yethu; futhi siqonde ukugcinwa nokuhehwa kwabasebenzisi bethu; ukubheka nokuvikela noma yiziphi izinkinga ngezinsizakalo zethu; nokwenza ngezifiso isipiliyoni sakho; noma
(5) Usinike imvume yakho - ngokwesibonelo ngaphambi kokuthi sibeke amakhukhi athile kudivayisi yakho futhi uwafinyelele futhi uwahlaziye kamuva, njengoba kuchazwe kunqubomgomo yethu yamakhukhi.
Asithengisi imininingwane yangasese yabasebenzisi bethu.
Sabelana ngolwazi ngawe ezimweni ezinqunyelwe ezichazwe ngezansi nangezivikelo ezifanele zobumfihlo bakho:
Abaxhasi, Abasebenzi, kanye Nosonkontileka Abazimele: Singadalula imininingwane ngawe kwizinkampani zethu ezingaphansi kwethu, abasebenzi bethu kanye nabantu abangosonkontileka bethu abazimele abadinga ukwazi imininingwane ukuze basisize ukuhlinzeka ngezinsizakalo zethu noma ukucubungula imininingwane egameni lethu. Sifuna abaxhasi bethu, abasebenzi kanye nosonkontileka abazimele ukuthi balandele le Nqubomgomo Yobumfihlo yemininingwane yomuntu siqu esabelana ngayo nabo.
Abathengisi Besithathu: Singabelana ngolwazi ngawe nabathengisi besithathu abadinga ukwazi imininingwane ngawe ukuze bahlinzeke izinsizakalo zabo kithi, noma banikeze izinsizakalo zabo kuwe noma indawo yakho. Leli qembu lifaka abathengisi abasisiza ukuhlinzeka ngezinsizakalo zethu kuwe (njengabahlinzeki bezinkokhelo abasebenza imininingwane yekhadi lakho lesikweletu nezezimali, abahlinzeki ngenkokhelo obasebenzisela imisebenzi yakho ye-ecommerce, izinsizakalo zokuvimbela inkohliso ezisivumela ukuthi sihlaziye ukukhokha okukhwabanisa, ukuthunyelwa kweposi kanye ne-imeyili izinsizakalo ezisisiza ukuthi zihlale zixhumana nawe, izinsizakalo zokuxoxa namakhasimende nezinsizakalo ze-imeyili ezisisiza ukuxhumana nawe, lezo ezisisiza ngemizamo yethu yokumaketha (isib ngokunikeza amathuluzi wokuhlonza iqembu elithile lokuqondisa noma ukuthuthukisa imikhankaso yethu yokumaketha) , lezo ezisisiza ukuba siqonde futhi sithuthukise Izinsizakalo zethu (njengabahlinzeki be-analytics), nezinkampani ezenza imikhiqizo kutholakale kumawebhusayithi ethu (njengezandiso ku kerryblues.info, forum.kerryblues.info & chat.kerryblues.info), okungenzeka badinga imininingwane ngawe ukuze, ngokwesibonelo, bakunikeze izinsizakalo zobuchwepheshe noma ezinye izinsiza zokusekelwa. Sidinga abathengisi ukuthi bavume ukuzibophezela kobumfihlo ngokubhalwa ukuhlanganyela imininingwane nabo. Abanye abathengisi bakleliswe kuzinqubomgomo zethu ezicacisiwe (isib. Inqubomgomo yethu Yekhukhi).
Izidingo Zezomthetho Nezokulawula: Singadalula imininingwane ngawe ukuphendula i-subpoena, i-oda lenkantolo, noma esinye isicelo sikahulumeni. Ngemininingwane engaphezulu yokuthi siphendula kanjani izicelo zemininingwane ngabasebenzisi be-WordPress.com, Sicela uthumele imibuzo yakho ku- [Email protected]_Domain.
Ukuvikela Amalungelo, Impahla, Nabanye: Singadalula imininingwane ngawe uma sikholelwa ekuthembekeni okuhle ukuthi ukudalulwa kuyadingeka ukuvikela impahla noma amalungelo Kerry Blue Terrier Foundation, abantu besithathu, noma umphakathi uwonke. Isibonelo, uma sinokholo oluhle lokuthi kunengozi eseduze yokufa noma ukulimala okungathi sína komzimba, singadalula imininingwane ehlobene nesimo esiphuthumayo ngaphandle kokulibala.
Ukudluliselwa Kwebhizinisi: Ngokuphathelene nanoma yikuphi ukuhlangana, ukuthengiswa kwempahla yenkampani, noma ukutholwa kwabo bonke noma ingxenye yebhizinisi lethu ngenye inkampani, noma kumcimbi ongalindelekile Kerry Blue Terrier Foundation liphuma ibhizinisi noma lingena ekuqothulweni, imininingwane yomsebenzisi ingahle ibe ngenye yezimpahla ezidlulisiwe noma ezitholwe yinkampani yangaphandle. Uma ngabe eminye yale micimbi ibingenzeka, le Nqubomgomo Yobumfihlo ingaqhubeka nokusebenza kulwazi lwakho futhi iqembu elithola imininingwane yakho lingaqhubeka nokusebenzisa imininingwane yakho, kepha lihambisana kuphela nale Nqubomgomo Yobumfihlo.
NgeMvume Yakho: Singabelana futhi siveze imininingwane ngemvume yakho noma ngasendaweni yakho. Isibonelo, singabelana ngemininingwane yakho nabantu besithathu ogunyaza ukuthi senze njalo, njengezinsizakalo zokuxhumana nabantu ozixhumanisa nesayithi lakho ngokusebenzisa isici sethu Sokushicilela.
Imininingwane Ehlanganisiwe noma Ehlonziwe Singabelana ngolwazi oluhlanganisiwe noma olukhonjwe ngesizathu, ukuze imininingwane ingeze isetshenziswe ukukubonakalisa. Isibonelo, singashicilela izibalo ezihlanganisiwe ngokusetshenziswa Kwezinsizakalo zethu futhi singabelana ngenguqulo esheshayo yekheli lakho le-imeyili ukwenza lula imikhankaso yezikhangiso eyenziwe ngezifiso kwamanye amapulatifomu.
Abanikazi besayithi: Uma une-kerryblues.info, forum.kerryblues.info & chat.kerryblues.info noma i-akhawunti yesikhulumi ehambisana nayo futhi uxhumana nesayithi, imininingwane yakho ingahle yabelwane nabaphathi besayithi. Isibonelo, uma ushiya amazwana kusayithi elisebenzisa Izinsizakalo zethu, ikheli lakho le-IP kanye nekheli le-imeyili elihlotshaniswa nekerryblues.info yakho, forum.kerryblues.info & chat.kerryblues.info yama-akhawunti wesikhulumi esihambisanayo angabiwa ne-akhawunti umphathi (s) wesayithi lapho ushiye khona amazwana.
Izicelo Zokuxhasa Ezishicilelwe: Futhi uma usithumela isicelo (ngokwesibonelo, nge-imeyili yokusekela noma enye yezindlela zethu zokuphendula), sinelungelo lokushicilela leso sicelo ukuze usisize ukucacisa noma ukuphendula isicelo sakho noma ukusisiza ukusekela abanye abasebenzisi.
Imininingwane okhetha ukuyenza umphakathi uyiqedile - ivezwe obala.
Lokho kusho, yiqiniso, ukuthi imininingwane efana nephrofayela yakho esesidlangalaleni, okuthunyelwe, nokunye okuqukethwe okwenziwa obala kuwebhusayithi yakho, kanye nama- “Likes” akho namazwana akwezinye amawebhusayithi, wonke ayatholakala kwabanye-futhi sethemba ukuthi uzothola okuningi ukubukwa!
Isibonelo, isithombe osilayisha kuphrofayela yakho esesidlangalaleni, noma isithombe esizenzakalelayo uma ungasilayisanga esisodwa, sakho Gngokubambelela Ri-Avatar ebonakalayo, noma i-Gravatar .. I-Gravatar yakho, kanye neminye imininingwane yasesidlangalaleni, izoveza ngamazwana kanye nokuthi "Ukuthandwa" okwenzayo kumawebhusayithi wabanye abasebenzisi ngenkathi ungene ngemvume kerryblues.info yakho, isithangami.kerryblues.info nokuxoxa .kerryblues.info noma ama-akhawunti wesikhulumi esihambisanayo. Imininingwane yakho ye-Gravatar + yomphakathi ingabonakala futhi ngamazwana akho, "Ukuthand," nokunye ukusebenzisana kumawebhusayithi asebenzisa insizakalo yethu ye-Gravatar, uma ikheli le-imeyili elihlotshaniswa ne-akhawunti yakho nathi lifana nekheli le-imeyili olisebenzisa ku-imeyili elinye iwebhusayithi.
Siphinde futhi sinikeze ukusakazwa kwe- "Firehose" yemininingwane yomphakathi (njengokuthunyelwe namazwana) kusuka kumasayithi athile asebenzisa izinsiza zethu ukuhlinzeka leyo mininingwane kubabhalisile beFirehose, abangabuka futhi bahlaziye okuqukethwe (konke kuncike kwimigomo Yensizakalo yethu), kepha awunamalungelo wokuyishicilela kabusha, esidlangalaleni.
Imininingwane yomphakathi nayo ingakhonjiswa ngezinjini zokucinga noma ezisetshenziswa ngabantu besithathu.
Uyacelwa ukuba ugcine konke lokhu engqondweni lapho unquma ukuthi yini ongathanda ukuyabelana ngakho kubalulekile.
Silahla ngokujwayelekile imininingwane ngawe uma singasadingi imininingwane ngezinhloso esiziqoqayo futhi sizisebenzise - ezichazwe esigabeni esingenhla kokuthi kanjani futhi kungani sisebenzisa imininingwane - futhi asidingeki ngokomthetho ukuthi siqhubeke nokukugcina .
Isibonelo, sigcina izingodo zeseva yewebhu eziqopha imininingwane mayelana nesivakashi kwenye yamawebhusayithi e-kerryblues.info, forum.kerryblues.info kanye nengxoxo.kerryblues.info, njengekheli lesivakashi se-IP, uhlobo lwesiphequluli, nohlelo olusebenzayo, lwe cishe izinsuku ze-30. Sigcina izingodo zalesi sikhathi ukuze, phakathi kokunye, sihlaziye ukutholakala kwama-traffic kumawebusayithi kerryblues.info, forum.kerryblues.info kanye nengxoxo.kerryblues.info bese siphenya ngezinkinga uma kukhona okungahambi kahle kwenye yamawebhusayithi ethu.
Njengesinye isibonelo, uma ususa okuthunyelwe, ikhasi, noma ukuphawula kusuka kusayithi lakho le-kerryblues.info, isithangami.kerryblues.info kanye nengxoxo.kerryblues.info, ihlala kufolda yakho yeDoti izinsuku ezingamashumi amathathu uma nje ungashintsha ingqondo yakho bese ngingathanda ukubuyisa lokho okuqukethwe - ngoba ukuqala futhi kusukela ekuqaleni akusimnandi, nhlobo. Ngemuva kokuphela kwezinsuku ezingamashumi amathathu, okuqukethwe okususiwe kungahlala kuma-backups ethu kanye nezilondolozi kuze kube kuhlanza.
Yize ingekho insiza eku-inthanethi evikelekile i-100%, sisebenza kanzima ukuvikela imininingwane ngawe ekufinyeleleni okungagunyaziwe, ukusetshenziswa, ukuguqulwa, noma ukubhujiswa, futhi sithatha izinyathelo ezinengqondo zokwenza lokho, njengokuqapha izinsiza zethu ngobungozi nokuhlaselwa okungaba khona.
Ukuze uthuthukise ukuphepha kwe-akhawunti yakho, sikukhuthaza ukuthi ukhethe amaphasiwedi aqinile futhi utshele uma ucabanga ukuthi i-akhawunti yakho intshontshiwe.
Unokukhetha okuningana okutholakalayo uma kukhulunywa imininingwane ngawe:
Khawulela ulwazi Olunikeza: Uma une-akhawunti nathi, ungakhetha ukunganikeli imininingwane ye-akhawunti ongayikhetha, imininingwane yephrofayela, nokuthengiselana kanye nolwazi lokukhokhisa. Uyacelwa ukuthi wazi ukuthi uma unganikezeli lolu lwazi, izici ezithile zoMnyango wethu - ngokwesibonelo, ezikhokhelwayo, izingqikithi zeprimiyamu - kungenzeka zingatholakali.
Khawulela Ukufinyelela Olwazini kudivayisi yakho Yeselula: Uhlelo lwakho lokusebenza lwedivayisi eselula kufanele lunikeze wena amandla okuyeka ikhono lethu lokuqoqa imininingwane egciniwe noma imininingwane yendawo ngokusebenzisa izinhlelo zethu zokusebenza zeselula. Uma wenza njalo, ungahle ungakwazi ukusebenzisa izici ezithile (njengokufaka indawo esithombeni, ngokwesibonelo).
Ukukhetha ukuphuma kwezokuxhumana: Ungahle uphume ekutholeni ukuxhumana okuphromotha kithi. Vele ulandele imiyalo kulokho ukuxhumana noma usazise. Uma ukhetha ukuphuma ezokuxhumana okwenyusayo, sisengakuthumela okunye ukuxhumana, okufana nokuphathelene ne-akhawunti yakho nezaziso zezomthetho.
Setha isiphequluli sakho ukuze senqabe amakhukhi: Okwamanje, i-Automattic ayiphenduli kumasiginali “musa ukulandela” kuwo wonke amasevisi wethu. Noma kunjalo, uvame ukukhetha ukukhetha ukusetha isiphequluli sakho ukuze ususe noma usenqabe amakhukhi esiphequluli ngaphambi kokusebenzisa Kerry Blue Terrier Foundationamawebhusayithi, ngesidonsa esivela kwezinye izici Kerry Blue Terrier Foundationamawebhusayithi akho kungenzeka angasebenzi kahle ngaphandle kosizo lwamakhukhi.
Vala i-Akhawunti yakho: Ngenkathi singadabukisa kakhulu ukukubona uhamba, uma ungasafuni ukusebenzisa izinsiza zethu 🙁 🙁 🙁 :(, ungavala i-akhawunti yakho. Sicela wazi ukuthi kungenzeka siqhubeke nokugcina imininingwane yakho ngemuva kokuvala i-akhawunti yakho, njengoba kuchazwe ku-How Long We Gcina Imininingwane engenhla - ngokwesibonelo, lapho lolo lwazi ludingeka ngokufanelekile ukuhambisana (noma ukukhombisa ukuhambisana kwethu) nezibopho zomthetho ezifana nezicelo zokuphoqelelwa komthetho, noma ezidingekayo ngokufanelekile ngezintshisekelo zethu zebhizinisi elisemthethweni.
Uma utholakala emazweni athile, kufaka phakathi lawo angaphansi kwe-European General Data Protection Regulation (AKA the "GDPR"), imithetho yokuvikela imininingwane ikunikeza amalungelo maqondana nedatha yakho, kuncike kunoma yikuphi ukukhululwa okunikezwe yi umthetho, kubandakanya amalungelo oku:
Cela ukufinyelela kwimininingwane yakho;
Cela ukulungiswa noma ukususwa kwemininingwane yakho;
Wenqaba ukusetshenziswa kwethu kanye nokusebenza kwemininingwane yakho;
Cela ukuthi sikhawulele ukusetshenziswa kwethu kanye nokusebenza kwemininingwane yakho; futhi
Cela ukutholakala kwemininingwane yakho yangasese.
Imvamisa ungangena, ulungise, noma ucishe idatha yakho uqobo usebenzisa izilungiselelo ze-akhawunti yakho namathuluzi esiwanikeza, kepha uma ungakwazi ukukwenza lokho, noma ungathanda ukuxhumana nathi ngelinye lamanye amalungelo, skrolela phansi uye Ungasifinyelela Kanjani, kahle, ukuthola ukuthi ungasifinyelela kanjani.
Abantu be-EU nabo banelungelo lokufaka isikhalazo kuziphathimandla zikahulumeni zokuqondisa.
Kerry Blue Terrier Foundation izinkonzo zenziwa emhlabeni wonke. Okuhlukile Kerry Blue Terrier Foundation izinkampani zingumlawuli (noma umlawuli wokuxhumana naye) wolwazi lomuntu siqu, okusho ukuthi yinkampani ebhekele ukucubungula lolo lwazi, ngokubheka kwensizakalo ethile nendawo yomuntu oyedwa osebenzisa Izinsiza zethu.
Ngokuya ngezinsizakalo oyisebenzisayo, ngaphezu kwenkampani eyodwa kungaba ngumphathi wedatha yakho yangasese. Ngokuvamile, "isilawuli" yile Kerry Blue Terrier Foundation inkampani efake inkontileka nawe ngaphansi kwemibandela Yensizakalo Yomkhiqizo noma yensizakalo oyisebenzisayo. Kerry Blue Terrier Foundation, inkampani yethu esekwe e-US, isilawula eminye imisebenzi yokucubungula kuyo yonke imisebenzi yethu emhlabeni jikelele.
I-PO Box 1495 Solvang, CA 93464 USA
Uma unombuzo mayelana nale Nqubomgomo Yobumfihlo, noma ungathanda ukuxhumana nathi nganoma yimaphi amalungelo ashiwo esigabeni samalungelo akho ngenhla, sicela uthumele i-imeyili [Email protected]
Ngoba Kerry Blue Terrier FoundationIzinsizakalo zinikezwa emhlabeni jikelele, imininingwane ngawe esiyicubungula lapho usebenzisa izinsizakalo e-EU zingasetshenziswa, zigcinwe, futhi / noma zitholwe ngabantu abasebenza ngaphandle kwe-European Economic Area (EEA) abasebenzela thina, amanye amalungu yeqembu lethu lezinkampani, noma izinhlangano zedatha zangaphandle. Lokhu kuyadingeka ngezinhloso ezisohlwini lwesigaba se-How and Why We Use Information ingxenye engenhla. Lapho sinikeza imininingwane ngawe ezinhlakeni ezingaphandle kwe-EEA, sizothatha izinyathelo ezifanele zokuqinisekisa ukuthi umemukeli uvikela imininingwane yakho ngendlela efanele ngokuya ngale Nqubomgomo Yobumfihlo njengoba kufunwa ngumthetho osebenzayo. Lezi zinyathelo zifaka:
Endabeni yamabhizinisi asuselwe e-US, ukungena kwiKhomishini YaseYurophu kuvume ukuhlelwa okujwayelekile kwezivumelwano nawo, noma ukuqinisekisa ukuthi babhalisele Isihlangu Sobumfihlo se-EU-US; noma
Endabeni yamabhizinisi asuselwe kwamanye amazwe ngaphandle kwe-EEA, ukungena kwiKhomishini yaseYurophu kugunyaze ukuhlelwa okujwayelekile kwabo.
Ungasibuza eminye imininingwane ngezinyathelo esizithathayo ukuvikela imininingwane yakho uma siyidlulisa ku-EU.
Izikhangiso ezivela kunoma iyiphi Imisebenzi yethu zingalethwa ngamanethiwekhi wokukhangisa. Amanye amaqembu futhi anganikela ngezinsizakalo zokuhlaziya ngeMisebenzi yethu. Lawa amanethiwekhi ezikhangiso nabahlinzeki be-analytics bangasetha ubuchwepheshe bokulandela umkhondo (njengamakhukhi) ukuqoqa imininingwane ngokusetshenziswa kwakho Kwezinsizakalo zethu kuwo wonke amanye amawebhusayithi nezinsizakalo eziku-inthanethi. Lobu buchwepheshe buvumela laba bantu besithathu ukuthi babone insiza yakho ukuthi ihlanganise imininingwane ngawe noma abanye abasebenzisa idivaysi yakho. Lolu lwazi luvumela thina nezinye izinkampani ukuthi, phakathi kwezinye izinto, sihlaziye futhi silandele ukusetshenziswa, sinqume ukuthandwa kokuqukethwe okuthile, futhi silethe izikhangiso ezingabhekiswa kakhulu ezintshisakalweni zakho. Uyacelwa ukuthi uqaphele le Nqubomgomo Yobumfihlo kuphela ehlanganisa ukuqoqwa kwemininingwane nge Kerry Blue Terrier Foundation futhi ayimbozi ukuqoqwa kwemininingwane kwanoma yimuphi umkhangisi weqembu lesithathu noma abahlinzeki be-analytics.
Uma ungathanda ukusebenzisa noma yiziphi izandiso zewebhusayithi yethu ezinikezela ngezinsizakalo ezihlinzekwa ngabantu besithathu, sicela wazi ukuthi lapho uxhumana nabo ungahlinzeka ngemininingwane ephathelene nawe (noma izivakashi zakho zangasese) kulabo bantu besithathu. Isibonelo, ezinye izinsizakalo zabantu besithathu zingacela noma zidinge ukufinyelela kwakho (eyakho, izivakashi zakho, noma amakhasimende)), ngokwesibonelo, nge-pixel noma nge-cookie. Uyacelwa uqaphele ukuthi uma usebenzisa insizakalo yeqembu lesithathu noma unikeza ukufinyelela, idatha yakho izophathwa ngokuya ngenqubomgomo yobumfihlo yenethiwekhi nezenzo. Asinikazi noma silawule laba bantu besithathu, futhi banemithetho yabo mayelana nokuqoqwa, ukusetshenziswa, kanye nokwabelana ngolwazi, okufanele uluhlaziye ngaphambi kokusebenzisa isoftware noma izinsizakalo.
Ukuhlanganiswa kweqembu lesithathu
Ngeke sikwazi ukufaka bonke abahlinzeki beqembu lesithathu nabahlanganisi bedatha kodwa idatha ingaqoqwa ngabathengisi beqembu lesithathu:
Siphinde sisebenzise imininingwane mayelana nezivakashi kumawebhusayithi abasebenzisi bethu, egameni labasebenzisi bethu futhi ngokuya ngezivumelwano zethu zabasebenzisi. Uyacelwa ukuthi uqaphele ukuthi ukucubungula kwethu lolo lwazi egameni labasebenzisi bethu kumawebhusayithi abo akumelwe yiNqubomgomo Yobumfihlo. Sikhuthaza abasebenzisi bethu ukuthi bathumele inqubomgomo yobumfihlo echaza ngokunembile imisebenzi yabo ekuqoqweni kwedatha, ukusetshenziswa, kanye nokwabelana ngemininingwane yomuntu siqu.
Nakuba izinguquko eziningi kungenzeka zibe zincane, Kerry Blue Terrier Foundation ingashintsha inqubomgomo yayo yobumfihlo ngezikhathi ezithile. Kerry Blue Terrier Foundation igqugquzela izivakashi ukuthi zivame ukulihlola leli khasi noma yiziphi izinguquko ezinqubomgomo Yobumfihlo. Uma senza ushintsho, sizokwazisa ngokubukeza irekhodi lokushintsha elingezansi, futhi, kwezinye izikhathi, singanikeza inothi eyengeziwe. Ukuqhubeka kwakho nokusebenzisa izinsizakalo ngemuva koshintsho kunqubomgomo yethu yobumfihlo kuzokhonjelwa kwinqubomgomo evuselelwe
Yilokho kuphela! Siyabonga ngokufunda.
© Kerry Blue Terrier Foundation. Ngiyabonga ngesikhathi sakho.